Daniel Agger Oo Doonaya Inuu La Sii Joogo Kooxdiisa Iyo Liverpool Oo Rabta Inay Ku Qaan Baxdo. - jornalizem
Daniel Agger Oo Doonaya Inuu La Sii Joogo Kooxdiisa Iyo Liverpool Oo Rabta Inay Ku Qaan Baxdo.
Daniel Agger ayaa qirey in uu jeclaan lahaa in uu la sii joogo kooxda Liverpool, balse waxa uu sheegay in xaalku uusan ahayn mid gacmihiisa ku jira.
Manchester City iyo Barcelona ayaa aad u doonaya Agger waxaana labo jeer lacago ay bandhigtey laga diidey kooxda haysata horyaalka Premier League ee City.
Manchester City ayaa loo malaynayo in mar saddexad ay dalab ay ku dooneyso Agger u gudbin doonto Liverpool, Mancini ayaa aad u jecel in daafacan uu ku soo daro kooxdiisa kahor inta uusan xirmin suuqa.
Waxaa la sheegay in Liverpool inay diyaar u tahay in ay qiime macquul ah dhaafsiisato Agger si ay ugu daboosho qarashkaas baahida ka haysata kooxda meelo kale.
Agger oo hadda ku maqan diyaargarow uu xulka dalkiisa Denmark ugu jiro ciyaar saaxibtinimo oo Arbacada la yeelanayaan Slovenia ayaa sheegay inuusan ka warqabin oo xiiso ku haynba waxa la sheegayo isagana uu jecel yahay in uu iskala sii joogo Liverpool.
“May, waxba ma maqlin,” ayuu Agger u sheegay Ekstra Bladet markii wax laga weydiiyey mustaqbalkiisa.
“Taasi waa sida ay kooxdu dooneyso, waxaanse jeclaan lahaa in aan sii joogo.
“Ma qiyaasi karo sidii aan ugu ciyaari lahaa kooxo kale oo ka jira England, balse marnaba ma ogaatid in kooxdaada ay doorbido inay ku iibiso.”
Si kasta ha ahaatee Agger ayaa dhowaan jirkiisa ku soo xardhay bilowga heesta ay caanka ku tahay kooxda Liverpool YNWA, waxaana uu 27jirkan ku adkeysanayaa in farshaxankaasi uusan waxba ku lug lahayn xaalada hadda jirta.